abhishek bachhan | Ratopati
भीड देखेपछि किन रिसाइहाल्छिन् जया बच्चन ? छोरी श्वेताले बताएकी थिइन् कारणः उनलाई क्लस्टेरोफोबिया नामको रोग छ access_timeचैत २७, २०७७
जया बच्चन ७३ वर्ष पुगेकी छिन् । ९ अप्रिल सन् १९४८ मा जबलपुरमा जन्मिएकी जयाले सन् १९७१ मा रिलिज भएको फिल्म ‘गुड्डी’ मार्फत् करियरको सुरुवात गरिन् । हुन त जया स–सानो कुरामा पनि भड्किने बताइन्छ । यो कुराको विषयमा उनकी छोरी श्वेता र छोरा अभिषेकले एक खुल...
अभिषेक बच्चनको जन्मदिनमा भावुक भए अमिताभ बच्चन access_timeमाघ २३, २०७७
हिन्दी सिनेमाका दिग्गज अभिनेता अभिषेक बच्चन ५ फेब्रअुरी अर्थात् आज ४५ वर्ष पुगेका छन् । छोरा यो उमेरमा पुग्दा पिता अमिताभ बच्चन भावुक भएका छन् । यसको अन्दाज उनको फेसबुक पोस्टमार्फत् गर्न सकिन्छ । अमिताभले इन्स्टाग्राममा अभिषेकसँगको दुईवटा तस्बिर कोलाज पोस्ट गरेका छन् । योसँग...
करिष्मा कपुरसँग टुटेको थियो अभिषेक बच्चनको इन्गेजमेन्ट, फिल्मको सेटमा करिनाले भिनाजु भनेर बोलाउँथिन्; रोमान्टिक सीन दिन गरेकी थिइन् अस्विकार access_timeमाघ २३, २०७७
बलिउड नायक अभिषेक बच्चन ४५ वर्ष पुगेका छन् । ५ फेब्रुअरी सन् १९७६ मा मुम्बईमा जन्मिएका उनीबारे निकै कमलाई थाहा होला कि उनी नायकका साथै निर्माता, गायक र टिभीका कार्यक्रम प्रस्तोता पनि भइसकेका छन् । अभिषेक बच्चनले सन् २००० मा फिल्ममा डेब्यू गरेका थिए तर यसअघि उन...
बुहारी ऐश्वर्या रायको यो बानी मन पराउँदिनन् श्वेता बच्चन access_timeपुस ३, २०७७
श्वेता बच्चन र ऐश्वर्या राय बच्चनबीच निकै राम्रो सम्बन्ध छ, यसमा कुनै शंका छैन । यद्यपि, सोसल मिडियाम यो बन्डिङ खासै राम्रो देखिँदैन । ऐश्वर्या आफूलाई इन्टरनेटबाट टाढै राख्न रुचाउँछिन्, यस्तै श्वेता पनि कमै सक्रिय रहन्छिन् । उनीहरुलाई कहिलेकाँही बाहिर सँगै घुमिरहेको देख्न स...
‘बब विश्वास’ मा अभिषेक बच्चनलाई चिन्न मुश्किल, सार्वजनिक भयो सुटिङको तस्बिर access_timeमंसिर ११, २०७७
बलिउड अभिनेता अभिषेक बच्चन नयाँ थ्रिलर फिल्म ‘बब विश्वास’ को सुटिङ गरिरहेका छन् । अभिषेकले कोलकातामा पुनः सुटिङ सुरु गरेका छन् र डिसेम्बर ९ सम्म ‘बब विश्वास’ सँग एक्सनमा रहनेछन् । फिल्मको निर्माण गौरी खान, सुजोय घोष र गौरव वर्माले गरेका हुन् र...
अभिनयबाहेक लगानीमा पनि अब्बल छिन् नायिका, थाहा पाउनुहोस् कति फैलिएको छ अभिषेक–ऐश्वर्याको कारोबार access_timeकात्तिक १६, २०७७
फिल्म एउटा यस्तो व्यापार हो जहाँ लगातार उतार–चढाव देख्न पाइन्छ । यस्तै स्थिती यो इन्डष्ट्रिमा काम गर्ने कलाकारसँग पनि हुन्छ । यस्तोमा पर्दामा राम्रो स्थिती बनाउन सफल स्टार यसका लागि तयार हुन्छन् । उनीहरु सँगै मिलेर विभिन्न व्यापार चलाउँछन् । यस्तो गर्ने कलाकारको सूचीमा ...
अभिषेक बच्चनलाई ट्रोलरले भने, ‘सिनेमाघर खुल्दा पनि हुनेछौ बेरोजगार’, दिए यस्तो जवाफ access_timeअसोज १६, २०७७
ट्रोलरसँग कस्तो व्यवहार गर्ने ? दिमाग नतताई उनीहरुको बोली कसरी बन्द गर्ने ? यो अभिषेक बच्चनबाट सिक्नुपर्छ । अभिषेक बच्चन सोसल मिडियामा सधैं ट्रोल्सको निशानामा आउँछन् । विशेषगरी आफ्नो करियरको विषयमा तर अभिषेक आफ्नो नियन्त्रण नगुमाई ट्रोलर्सको मुख थुनिदिने काम गर्छन् । बु...
ट्रोलरले अभिषेक बच्चनलाई सोधिन्, ‘ड्रग्स छ त ?’ नायकले फर्काए यस्तो जवाफ access_timeअसोज १५, २०७७
बलिउड अभिनेता अभिषेक बच्चन सोसल मिडियामा निकै सक्रिय छन् । उनको पोष्टमा आउने प्रतिक्रियामा पनि उनको नजर दौडिएको हुन्छ । त्यसैले त थुप्रै पटक ट्रोल्समा जवाफ पनि फर्काउने गर्छन् । अभिषेकले पुनः एकपटक त्यसै गरेका छन् । प्रयोगकर्ताले अभिषेकलाई सोधिन्, ‘ह्याश छ त ?&rs...
अभिषेक बच्चन र विवेक ओबरोयले एकअर्कालाई अँगालो हाले, के वैमनश्यता बिर्सिएकै हुन् ? access_timeभदौ २३, २०७६
यस्तो लाग्छ कि अब विवेक ओबरोय र अभिषेक बच्चनबीच सबैकुरा ठिक भइसकेको छ । उनीहरुले आफ्नो सबै वैमनश्यता बिर्सिएका छन् । हालैको उनीहरुको व्यवहार देखेर मानिसहरुले यस्तै अड्कलबाजी गरिरहेका छन् । वास्तवमा ब्याडमिन्टन स्टार पि.वि. सिन्धुका लागि आयोजित एक सम्मान समारोहमा थुप्...